चीनको दावी : कारोना भाइरस अमेरिकी सेनाले चीन भित्र्याएको हो ! | Pennepal
Home हेडर चीनको दावी : कारोना भाइरस अमेरिकी सेनाले चीन भित्र्याएको हो !
एजेन्सी । चीनका विदेश मन्त्रालय प्रवक्ता चाओ लिचियानले अमेरिकाी सेनाले चीनको वुहानमा कोरोका भाइसर भित्र्याएको आरोप लगाएका छन् । उनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् अमेरिकी सेनाले हुबेईको वुहानमा कोरोना भाइरस भित्र्याएको आरोप लगाएका हुन् ।